म्याग्दीमा ६१ प्रतिशत निजी आवास पुनर्निर्माण सम्पन्न | Artha News Nepal
Home	विकास	म्याग्दीमा ६१ प्रतिशत निजी आवास पुनर्निर्माण सम्पन्न
म्याग्दी – म्याग्दीमा ६१ प्रतिशत भूकम्पपीडितले निजी आवास पुनर्निर्माण सकेका छन् । विसं २०७२ वैशाखको भूकम्पका कारण घर भत्किएर राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणसँग सम्झौता गरी पहिलो किस्ता अनुदान लगेकामध्ये हालसम्म ६०२ जनाले आवास पुनर्निर्माण गरेका हुन् ।
प्राधिकरणको जिल्ला आयोजना कार्यान्वयन एकाइका प्रमुख नारायण ढकालका अनुसार ९८१ लाभग्राहीले रू. ५० हजारका दरले पहिलो किस्ता अनुदान लगेका छन् । ‘६६५ जनाले दोस्रो किस्ता लगेका छन्’, उनले भने, ‘सम्झौता गरेका ८३ जनाले अनुदान लगेका छैनन् ।’
सम्झौता गरेर पहिलो किस्ता अनुदान नलैजाने र पुनर्निर्माण शुरु नगर्नेलाई लाभग्राहीको सूचीबाट हटाउने प्रक्रिया अघि बढाउने तयारीमा रहेको कार्यालय प्रमुख ढकालले बताए । भूकम्पबाट कम प्रभावित जिल्लाको सूचीमा पर्ने म्याग्दीमा २०७३ चैतदेखि सम्झौता र २०७४ मंसिरदेखि पीडितको खातामा अनुदान पठाएर निजी आवास पुनर्निर्माण शुरु गरिएको थियो ।
दोस्रो किस्तावापत डिपिसी गरेपछि रू. एक लाख ५० हजार र भवन बनाएपछि अन्तिम किस्तावापत रू. एक लाख अनुदान उपलब्ध गराउने कार्यविधि छ ।
प्राविधिक आउनुअघि बनेका १४२ ओटा घरका धनीलाई गत वर्ष एकमुष्ट रू. दुई लाख ५० हजारका दरले भुक्तानी गरिएको थियो । उनीहरुले यसअघि रू. ५० हजारका दरले अनुदान लगेका थिए ।
छूट तथा पुनः सर्वेक्षणबाट थपिएका १८० जनामध्ये १४० जनासँग सम्झौता भएको छ । राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणले २०७७ मंसिर मसान्तसम्म सम्झौता र २०७७ पुस १५ गतेभित्र पहिलो किस्ता अनुदान लगिसक्नुपर्ने समय तालिका बनाएको थियो ।
समयतालिकाअनुसार आवासको डिपिसी (जग बसाल्ने) काम सकेर दोस्रो किस्ताको लागि २०७७ माघ मसान्त र अन्तिम तथा तेस्रो किस्ता भुक्तानीका लागि २०७८ वैशाख मसान्तभित्र स्थानीय तहमा निवेदन पेश गर्नुपर्छ । विसं २०७३ पुसमा इञ्जिनीयरहरु परिचालन गरेर एक हजार ३५० घर सर्वेक्षण गरिएको थियो ।
सर्वेक्षण गरिएकामध्ये ९८१ लाभग्राही पहिचान भएका हुन् । पहिलो किस्ता लगेर दोस्रो किस्ता लिन बाँकीको संख्या ३१६ छ । चार वर्षअघि अनुदान पाए पनि जग्गा व्यवस्थापनलगायत समस्याले गर्दा बल्ल अहिले घर पुनर्निर्माण शुरु गरेको अन्नपूर्ण गाउँपालिका–२ कटुञ्जेका डिलबहादुर राम्जालीले बताए ।
राम्जालीको कटुञ्जेस्थित घर भूकम्पले जीर्ण बनाएकाले ठूलोबगरमा जग्गा व्यवस्थापन गरेर नयाँ घर निर्माण शुरु गरेका छन् ।
पहिलो किस्ता लगेर घर पुनर्निर्माण शुरु गरी दोस्रो किस्ता लिनै नआएका लाभग्राहीका कारण पुनर्निर्माणमा चुनौती देखिएको छ । ‘पुनर्निर्माण शुरु नगरेकालाई अनुदान फिर्ता गर्न स्थानीय तहमार्फत ताकेता गरिएको छ’, कार्यालय प्रमुख ढकालले भने, ‘पहिलो र दोस्रो किस्ताको अनुदान लिनेको अन्तर घट्दै गएकाले आगामी वैशाख महीनाभित्र निजी आवास पुनर्निर्माण सक्ने लक्ष्य पूरा हुने आशामा छौँ ।’
भूकम्पले चर्किएको पहाड खसेर पुरिएको रघुगंगा गाउँपालिका–२ र अन्नपूर्ण गाउँपालिका–८ मा पर्ने बैसरीलाई जोखिम बस्ती पहिचान गरी अन्यत्र जग्गा नभएका तीन घरधुरीलाई जग्गा खरीदका लागि थप रू. दुई लाख उपलब्ध गराइएको छ ।
प्राधिकरणमार्फत सञ्चालित १८ दशमलव ५४ किलोमिटर दूरीको घारखोला–चित्रे सडक स्तरोन्नति आयोजनाको हालसम्म करीब ५० प्रतिशत भौतिक प्रगति भएको छ । पोखरेबगर–पाउद्वार सडकअन्तर्गत घारखोलामा मोटरेबल पुल निर्माण शुरु भएको छ । २५ मिटर लामो पुल निर्माणको काम ठेक्का सम्झौता भएको एक वर्षपछि शुरु भएको हो ।